ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က လင်းသဏ်ညီ၊ မောင်မင်းစိုး၊ စိုးမင်းအောင်၊ ဆူးရင့်နဲ့ ညိုပြာဝိုင် တို့ ရဲ့ မရူးလွင့်ရန်လေ ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကို ရောက်ခဲ့တယ်။ မရူးလွင့်ရန်လေ ဆိုတဲ့ စာအုပ်နာမည်ကိုက ထူးခြားပါတယ်။ သူတို့ ငါးယောက် ခေါင်းစဉ်ရွေးလို့ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တဲ့အဆုံး တစ်ယောက်ကို စကားလုံးတစ်လုံး ရွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး အဲဒီ စကားလုံးတွေနဲ့ ခေါင်းစဉ် တစ်ခုရွေးဖို့ လုပ်ကြရင်း ဒီ မရူးလွင့်ရန် လေ ဆိုတဲ့ နာမည်လေးကို ရခဲ့တာပါတဲ့။ နောက် တစ်ယောက်ချင်းစီ ကဗျာရွတ်ကြတဲ့ထဲ
မောင်မင်းစိုး ရွတ်တဲ့ ကဗျာလေးကို သတိထားလိုက်မိတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ပါတာကတော့ ငှက် ဆိုတဲ့ ကဗျာပါ။ ဒါကို ဒီစာလုံးတွေနဲ့ပဲ တစ်မျိုး ပြန်ရေးလိုက်တဲ့အခါ နောက်ထပ် အဓိပ္ပာယ် မတူတော့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ရပါတယ်။ အဲဒါကို သူက မောင်မင်းစိုး လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အောက်က ငှက် လို့ လက်မှတ်ထိုးပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးကို စိုးမင်းအောင် ဆီက တဆင့် တောင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ဖတ်ကြည့်ဖို့ပါ။
မပျံသန်းရ နယ်မြေကိုမှ ရွေးပြီး ပျံချင်တဲ့ ငှက်
နက်သထက် နက်တဲ့ တွင်းနက်ထဲ ခုန်ဆင်းချင် သူ
ဘဝကို သားရေကွင်းလို ဆွဲဆန့်လိုက်တော့
သံသရာက နူးညံ့စွာ ရှည်လျား
အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့် မပြုတဲ့ အိမ်စောင့်နတ်
ငါ့မျက်လုံးဖောက်၊ ငါ့နားကို ပိတ်
မြင်စရာ အာရုံတွေ ရှုချင်စဖွယ်
အတွင်းမှာ အူတိုင်ပြုတ်တဲ့ ချည်ခင်
လေတိုက်တိုင်း မြင့်တက်နေမယ့် စွန်
ကြိုးတွေ လျှော့ပြီး လွှတ်တင်လိုက်
ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ လေဟာနယ်ထဲ လွင့်နေမယ်။
ပျံသန်းရနယ်မြေကိုမှ ရွေးပြီး မပျံချင်တဲ့ ငှက်
ခုန်ဆင်းချင်တဲ့ တွင်းနက်ထက် နက်တဲ့ သူ
သားရေ . . . ဘဝကို ကွင်းလို ဆွဲဆန့်လိုက်
နူးညံ့စွာကပါ၊ သံသရာက ရှည်လျားလို့။
ခွင့်မပြုတဲ့ အိမ်စောင့်နတ် အိမ်အပြင်ထွက်
မင့်မျက်လုံးကို ငါဖောက်၊ မင့်နားကို ငါပိတ်
မြင်စစ အာရုံတွေ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ရှုချင်
အတွင်းချည်ခင် ပြုတ်တဲ့ အူတိုင်
စွန် တိုက်တိုင်း၊ တက်မြင့်နေမယ့် လေ
လွှတ်တင်လိုက်ပြီ၊ ကြိုးတွေ လျှော့ချ
လွင့် နေ မယ်။
Posted by Zephyr at 3:18 AM2comments
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါ နာမကျန်းမှုမှာ နာလံထစေခဲ့တဲ့ ဆေးဝါးတွေထဲက တစ်ချို့ကို ပြန်မျှပေးတာပါပဲ။ ကဗျာဆရာ အိုအောင် ရဲ့ အလိုမပြည့်သူရဲ့ ပွဲလမ်းသဘင် ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးထဲကပါ။ သိပ်မရိုက်နိုင်သေးလို့ နည်းနည်းပဲ ရွေးတင်ပါတယ်။ နေကောင်းရင် တစ်အုပ်လုံးနီးပါး ရိုက်တင်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
ဈေးပေါင်ကျိုးမှ ဝယ်လို့ရမယ့် အမှန်တရား (သုံးထပ်သား)ရယ်
ထင်းအတွက်ပဲ အသုံးဝင်တဲ့ အော်ရီရှားအပင်လို ငတိတွေရယ်
အဲဒီငတိတွေရဲ့ လမင်းကြီးနဲ့ ရက်(ပ်)အက ကမယ်ဆိုတဲ့
နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့နဲ့ အရွယ်ဟိုင်းလာတဲ့ ကမ္ဘာလဆန်း တစ်ရက်နေ့ရယ်
၁၂လ ဇယားကွက်ပေါ်က ဟိုမင်းသမီးလေးရဲ့ သရိုးကိုင်ထားတဲ့
တစ်ချပ်မှောက်ဝိုင်းမှာ ပွဲသိမ်းဖို့ စောင့်နေတဲ့ စနေထောင့်ရယ်
ပဲကြီးဟင်း သောက်တဲ့ ဥတုသုံးလီရယ်
ပနယ်စလင် ငါးသိန်းအားနဲ့ မလုံလောက်တော့တဲ့ ဖောဌဖအာရုံရယ်
ကိုယ့်စားရိတ် ကိုယ်စားပြီး တဟီတီ သွားလည်ရတဲ့
ဤသည်မှာ ခင်ဗျား ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်
အပူသျှပ်နေသော ကျွန်တော့ ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်၏။ ။
ခရီးဆုံးထိ လောင်စာ။ ။
မိုးမကျသေးတာမို့ ။ ။
ဖွေးဖွေးလှုပ်အောင် ပွင့်နေကြတယ်။ ။
သမိုင်း၊ ပထဝီ၊ ဘောဂဗေဒ
ခက်ဆစ်တွေ၊ ပုစ္ဆာတွေနဲ့
ခေတ်တွေက ဆည်းပူးလို့မဆုံးပေါ့။ ။
တွေ့ကရာ အမိအရ ယမ်းလှုပ်ချ။
သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ အထင်ကရ မတ်စောက်ပုံပဲ။
ထပ်မံ ချဲ့ထွင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ
တို့ဘယ်လို ရှင်သန်ပေါက်ရောက်ကြတယ်ဆိုတာ ။ ။
တစ်ပိုင်းတစ်စ ပွင့်ဟနေတဲ့ ကန့်လန့်ကာကြားက
ဆိုင်းသံ ဗုံသံကြား အမြစ်မတွယ်ခဲ့သမို့
အနည်အနှစ်ကျကျ လွမ်းသံ ဆွေးသံလေး
ခုလည်း ဘေးမသီ ရန်မခ။
ဖားက ဖားလို ညာသံပေးနေကျ။
ငှက်တွေ ဘယ်အရပ်ကို ပျံနေကြသလဲ။
`တကယ့်ယောက်ျားတွေအတွက် တကယ့်အရသာ ` ၁
`ငါ့ခွေး သစ်ပင်တက်နိုင်တာ ဂုဏ်ယူတယ် ` တဲ့။ ၂
ကျွန်တော့်နာရီကို ဓာတ်ခဲလဲရဦးမယ် ။ ။
၂။ နာမည်ကြီး ကာတွန်းတစ်ကွက်
ဖုန်တသောသော မြို့ရွာနဲ့ သေချာမှု
မြေသင်းနံ့ ရပါပြီလား။ ။
ဒီနွေဟာ ခြင်းကြားနဲ့ ရေသယ်လာတဲ့
နွေပဲလား ။ ။
အာလာဒင် မီးခွက်စောင့် ဘီလူးဟာ
သတိရရင်း ။ ။
ဟိုး ခင်တန်းပေါ်မှာ ဗာမေးလီယံ စိန်ပန်းပွင့်များ ။ မိုးက စိတ်မပါ
လက်မပါ တစ်ပေါက်ချင်းကျနေ။ ကနေ့ ဥပုသ်နေ့ ၊ မြို့ထဲထွက်ရ
ကောင်းမလား၊ အခန်းထဲပဲ အောင်းနေရမလား၊ မှန်တစ်ချပ်ထဲမှာတော့
သူ့ကိုယ်သူ ကျပျောက်နေတဲ့ ငနဲတစ်ကောင်၊ မနေ့က စာတစ်စောင်
ရောက်လာတယ်၊ သဘောင်္မှောက်နေတဲ့ အောင်နှင်းရဲ့ အသံပေါ့။
ရန်ကုန်ကိုတော့ မဖွဲ့ချင်တော့ပါဘူး တဲ့လေ။ အခုတော့
သောက်ဖော် စားဖက် `တီကောင်` လည်း တောင်တန်းတွေဆီ
ထွက်သွား။ ဇော်ထိန် သယ်လာတဲ့ သတင်းကြောင့် အသည်းနှလုံးလည်း
ဆန်ခါပေါက်ဖြစ်။ ဘာအဓိပ္ပာယ် ရှိသလဲ၊ ဘယ်လို အနံ့အသက်လဲ။။
အပြင်မှာ စိမ်းသလိုလိုနဲ့ အထဲမှာ မလင်းဘူး။ အလကားရတဲ့
လေရှူရင်း အရိုးရင့်ခဲ့။ ဒီတစ်ရက်လည်း ငါ့ကို နေကြတ်သွားပြန်ပြီ။ ။
* vermilion - ဟသာင်္ပြဒါး
လူ့ဘောင်က မတရား အမှိုက်ရှုပ်တယ်
လူ့ရွာက မတရား ချွေးပြန်တယ်။
သန်လျက်နဲ့ ထွင်းထွင်းသွားကြရုံ။ ။
မဖွင့်ရသေးတဲ့ ထီလက်မှတ် တစ်စောင်လို။
ကမ္ဘာမြေကြီးကို ရူးရူးမူးမူး ပိုဖြစ်ရတဲ့
ထစ်အနေတဲ့ ဂီတ ဆိုတာလည်း
ရင်တမမနဲ့ ကြည့်နေရသလိုမျိုးပေါ့။ ။
တော်ရာမှာ ပျော်ရှာတဲ့ တောပန်းလေးတွေရယ်။
ငိုချင်လျက်လက်တို့ စီးမြဲ။ ။
သည်ရာသီကို လွန်မြောက်သွားရချိမ့်။ ။
အသော့ အထေ့ ဝတ္ထုတချို့
ဘယ်သူ့ကို အချဉ်ဖမ်းရမလဲ စိတ်နဲ့
ကျွန်တော်လား ခင်ဗျားလား သူတို့တစ်တွေလား။
တစ်ခွက် ပိုမော့တဲ့ အနှမ်းတွေနဲ့
မီးကုန် ယမ်းကုန် ပျော်စရာတွေ
ဤဇမ္ဗူဒီပထဲ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ ကျိကျိတက်။
ဘာဖြစ်လို့ ရုပ်ပျိုကိုယ်နု ဆေးရှာနေကြရသလဲ
ဘာဖြစ်လို့ သေမင်းနဲ့ မျက်နှာချင်း မဆိုင်ရဲကြသလဲ။
အဲ..ဟို ညိုပြာညက် ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးတွေ စနက်လား
ဟောဒီ ကျားကျားလျားလျား ကြွက်သားတွေ ပယောဂလား
ကိလေသာ အမည်ရ ဓာတ်ဆီကတော့
ကမ္ဘာကျော် ဇစ်ပိုမီးခြစ် ကြော်ငြာထဲက အတိုင်း စွမ်းစွမ်းတမံ။
ဒီပဲတွေ ဒီပုတ်ထဲ ရှိကြတာ
တစ်မနက်ခင်းလုံး ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မစားရသေးဘူး
သူ့အဖြစ်က မနှစ်ကနဲ့ မတူဘူးလို့
ဖွတ်ကျောပြာစု မနက်ခင်းလေး တစ်ခုက
ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ခရေစေ့တွင်းကျ ဖွင့်ဟလာ။
လူ့ပြည်ဟာ တစ်ခါတစ်ခါ ပွဲစားကြီးသားအဖ နဲ့ မြမြ ...၁
တစ်ခါတစ်ခါ ကောလိပ်ကြမ်းပိုး ..၂.. ဟန်ပေါက်လို့
တစ်ခါတစ်ခါ သံဖြူဇရပ် ချွေးမှတ်တမ်း ..၃ ဆန်နေတော့ရဲ့ ။ ။
ခင်ဗျားတို့လိုပဲ တိမ်တွေကို မော့ကြည့်ခဲ့တယ်
ဖျားတဲ့အခါ ဆေးသောက်ပြီး ချွေးထုတ်ခဲ့တယ်
အနုပညာနဲ့ မိန်းမကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။
ကိုယ့်အပင် ကိုယ်စိုက်ခဲ့တယ်လို့ သူကယုံတယ်
ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုပြာလွင်စေခဲ့တယ်လို့
ခင်ဗျားတို့လိုပဲ အကျပ်ရိုကဖူးတဲ့ ၊ ချောက်ကျဖူးတဲ့
ခဲမှန်ဖူးတဲ့၊ သေကောင်ပေါင်းလဲ ဖြစ်ဖူးတဲ့
ကဗျာဆိုတာ သေတွင်းထွက်မှန်း သိခဲ့ရတယ်..တဲ့။
(ဒါ အလိုမပြည့်သူရဲ့ ပွဲလမ်းသဘင် ကဗျာစာအုပ် အမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။)
လောကကြီး တိုက်ပုံအကျီ်မဝတ်ခင်
ကိုကိုမကြည့်ဝံ့ ရှန်သား ခေတ်စားစဉ်ကလို
ယားကျိကျိ လေထုမှာ မျက်စိစားပွဲထိုင်
သက်မများ ကျကွဲသံ အတိုင်းသား။
သုံးခွက် တစ်ခွက်တင် စကားလုံးများ
ဒီနေ့လည်း နေကျဲကျဲ ပူလိမ့်ဦးမယ်။ ။
သမုဒ္ဒရာ ၊ ပင်လယ်၊ မြစ်
လူပေါ် လူဇော် ပြဇာတ်တွေ
ဝါကြင့်ကြင့် သမိုင်းခေတ် ရေစီးကြောင်းတွေ။
ဆူလွယ် နပ်လွယ် အပျော်တွေ
လျှပ်ပေါ်လော်လည် မြို့ကြီး ပြကြီးတွေ
အမှန်တရား ကျောက်ဆောင် ကျောက်သားတွေ
ကျားကုတ် ကျားခဲ တိုက်ပွဲတွေ။
မြစ်တွေ အဖြစ်နဲ့ သက္ကရာဇ်တွေပေါ်မှာ
မှော်မဝင်သေးတဲ့ တိုင်းပြည်ကိုယ်စီနဲ့ ။ ။
မနက်ခင်း စောစော လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်ပါ
လောဘ သက္ကာယနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားပါ
ဖိုထဲထည့်၊ မီးဆေးကြည့်ခဲ့ကြတယ် မဟုတ်လား။
ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယတွေက
နဂိုမူလ အသွေးအသားနဲ့ ထိန်ညီး
သတ္တိ ဗျတ္တိ၊ ဘေးဥပဒ်
ပဲ့နင်း တစ်ဦးလိုလည်း နေထိုင်တတ်ခဲ့ဖူးမယ်။
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ..။ ။
အသက်ဓာတ်ရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါ မြင့်မြတ်ပုံကို
စိတ်လွတ်လက်လွတ် သွားလာနေထိုင်ခွင့် ရသမို့
ကိုယ်ပိုင် သီးခြား စကြဝဠာ တစ်ခုစီ
ပေါက်ကွဲမှု အားကောင်းသော ကဗျာ
ဂန္ထဝင် ခေတ်ပေါ် ဂီတနဲ့
ကျွန်တော့် အသက်ရှူသံ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်လို့။
ကြယ်တာရာတွေ ကွန့်မြူးနေခဲ့ပြီ။ ။
၁။ ပီမိုးနင်း ဝတ္ထု
၂။ ဇဝန ဝတ္ထု
၃။ လင်းယုန်သစ်လွင် (ကိုယ်တွေ့ ချွေးတပ် မှတ်တမ်း)
Posted by Zephyr at 8:53 AM2comments
တစ်စုံတစ်ခုသော စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကြောင့် ဒီနေ့ ကျွန်မ ကဗျာတွေပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ သိမ်းထားတဲ့ မှတ်သားထားတဲ့ ကဗျာတွေကို ပြန်ဖတ်ရတာ ပျော်စရာပါပဲ။ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေ ပြန်တွေ့ရသလိုပဲ။ မနက်ဖြန်ကလည်း ကမ္ဘာ့ ကဗျာနေ့ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကဗျာတွေကို ခပ်သွက်သွက်ပဲ ကောက်ရိုက်လိုက်မိတယ်။ တချို့ကဗျာတွေက မကြာခဏ သတိရနေမိတတ်တဲ့ ကဗျာတွေ၊ တချို့ကဗျာတွေက ပြန်ဖတ်မိတိုင်း မရိုးနိုင်တဲ့ ကဗျာတွေ၊ တချို့ကဗျာတွေက စိတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ ကဗျာတွေ … ခင်ဗျားတို့ သင်တို့ အားလုံးရဲ့ စိတ်တွေနဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ကျွန်တော့် အရပ်ထက်မြင့်သော မိုးဥတု
ကျွန်တော် တွယ်ကပ်နေသော သစ်ပင်မှာ
ကျွန်တော့်အပေါ် ၉၀ ဒီဂရီ
ပုတ်သင်ညိုများ မပါရှိခဲ့ ။
ကျွန်တော် ဖောဖောသီသီ စုဆောင်းထားနိုင်သော
ကျွန်တော်နဲ့ ချောက်ကမ်းပါးကြီးထဲက လူသားများ
ကျွန်တော်ရဲ့ ဟာမိုးနစ်များ ရစ်သမ်များ
၁-၂၈၊ ၁-၃၀၊ ၁-၃၁
ကျွန်တော် အိပ်ပျော်မယ် ကတိထားတိုင်း
ကျွန်တော် ရေတံခွန်ဝယ်ပြီး ဖွင့်နားထောင်တိုင်း
ကျွန်တော်ဟာ ကန်းထရီးစတိုင်များကို သဘောကျသူ
အန္တရာယ်ကိုယ်ငွေ့မှာ ၄၊ ၃၊ ၂
ကျွန်တော် ဆော့ခရတ္တိနဲ့ ရှယ်ရွန်စတုန်းကို တွဲပြီး
ကျွန်တော် ပန်းတစ်ပွင့်ပေါ် ဆင်းတော့မယ်
ပြန်မဝင်မိခဲ့ခင် အဖြစ်အပျက်များ ။ ။
ကျွန်တော် ကြယ်တွေကို လှမ်းပြီး အိမ်ပြန်လမ်း မေးမိတယ်
သူတို့ရယ်တယ် ကျွန်တော်လည်း ရယ်တာပေါ့ …
ကျွန်တော် ဘယ်နာရီမှများ အဖျားပျောက်မလဲ မေးမိတယ်
သူတို့ငိုတယ် ကျွန်တော်လည်း ငိုတာပေါ့ ..
နာရီစင်ကြီးရှေ့ ပလက်ဖောင်းစင်းစင်းလေး တစ်လျှောက်
ဘယ်မိုင်တိုင်များ ဆိုက်ကပ်နေပြီလဲ မီးလုံးစိမ်းစိမ်းလေးရယ်
ကျွန်တော် ထမင်းဆာလို့ မရဘူး။
အိမ်ရနံ့သီချင်းများ ဆင်းလာကြလိမ့်မယ်။ ။
၂၀၀၁၊ ဧပြီ၊ စတိုင်လ်သစ်
ဂျွန်လင်နွန် ထက်လူသိပိုများတဲ့ နွေရာသီ
ကျွန်တော်ဟာ နေပူထဲ ဖိတ်ကျနေတဲ့ မေမေ့ရဲ့ အရိပ်ကလေးပေါ့
ကျောက်ဆောင်ကို ရိုက်ခွဲနေတဲ့ လှိုင်းလုံးတွေလို
ငါ့ကို ရိုက်ခွဲနေတဲ့ နေရောင်ခြည်
ငါ့သွေးထဲ ပြေးဝင်လာတဲ့ တောမီး
ငါ့ဆီမှာ ထစ်ခြုန်းပစ်လိုက်ချင်တဲ့ လမ်းမ
တံလျှပ်ရဲ့ ကိုယ်ငွေ့တထောင်းထောင်းကို ကြားရတယ်
နေကြာပန်းခင်းကြီး တစ်ခုလုံး ခေါင်းငုံ့သွားအောင်
နေ့လည်ခင်းထဲ လင့်နေတဲ့ သေနတ်တစ်လက်
ပြီးတော့ ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ ကမ်းခြေ
ကမ္ဘာမြေပေါ် ခုန်ချနေတဲ့ သစ်ရွက်ကြွေ
ဘယ်စိတ်လေ စိတ်လွင့်ကိုမှ အရိပ်အာဝါသက ခူးမစားချင်ဘူး
ဖုန်ထူသော လမ်းကလေး သွေးဆောင်ရာ
ထုံးဖြူဖြူနဲ့ စေတီကလေးဆီ ..။ ။
သဟာ အမှောင်ထဲကို ထွက်ပြေးသွားပေါ့။ ။
၁၉၉၅၊ သြဂုတ်၊ တေးကဗျာ
ငါ့ဘဝထဲ ခုန်ခုန်ဝင်လာခဲ့ …။
ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ အဝေးက အော်သံ
ငါးဖယ်လိုခြစ်ပြီး ချိုခဲ့ရ ..။
ဘယ်သူများ လရဲရဲသာရဲသလဲ …။
ငါ့ရင်ထဲ ခုန်မောင်းဝင်လာပါတော့ …..။ ။
မြစ်ရဲ့ ခြေအစုံကို တောင်းပန်
လှချင်တိုင်းလှ ကြယ်မလေးရေ …
သင်ယူလို့မရတဲ့ မိုးဟာ ငါပဲပေါ့ ..။ ။
(ကျွန်တော်) သမုဒယမြားလေး ကံခေပုံ
ပစ်မှတ်ကတခြား ထိဆုံမှတ်က တခြား
လမ်းကြောင်းလွဲမှားခဲ့တဲ့ မြားလား ။
အရပ်က စိတ်တလျား ရှည်တာတောင်
မေမေ့မေတ္တာ မငတ်ရင် တော်ပြီဆိုတဲ့ကောင်
ထီမထင် ရိုင်းပြတတ်တဲ့ ကြက်ကလေး
မေမေ့သားမြတ်အစုံကို ခြေထောက်နဲ့ စုံကန်ခဲ့ဖူးပြီ
အဲသလိုပဲ သူရဲကောင်း ကဗျာဆရာက ငိုတယ်မေမေ။
စိတ်ကလေးက ခပ်တိုတို ကိုယ့်ထွက်ပေါက်နဲ့ကိုယ်
မေမေ့ချိုမြမှုတွေကို အဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ ခွေးလို ထိုးဟောင်ခဲ့သူ
ကရုဏာ အသံကို ဒေါသအဟုန်နဲ့ မာန်ဖီနေခဲ့သူ
အမေ့ဖြူစင်မှုတွေကို ကျွန်တော့်အတ္တနဲ့ စွန်းထင်းစေခဲ့သူ
သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ ကောင်ကလည်း ငိုတယ်
ဟောဒီမှာ ပုလဲပွင့်တွေ ပြာသိုလပြည့်နဲ့ ရောပြီး
မေမေ့ဆံနွယ်ဖွေးဖွေးမှာ ဆင်မြန်းပေးဖို့ မဝံ့ရဲနိုင်ခဲ့ပြီ။ ။
၂၀၀၂၊ စက်တင်ဘာ၊faces magazine
အဇာတသတ်ကို နင်းကြိတ်ခဲ့ ….
ခင်ဗျားတို့ မျက်လုံးတွေက တရားစွဲ
အနာဂါတ် သန္ဓေသားအတွက် …
မရေမတွက်နိုင်တဲ့ သား များစွာ
မိဘတို့ရဲ့ သတ်ခြင်း ခံနေရရှာရဲ့ ..။ ။
ငါ့ဆီက မမျှော်လင့်ပါနဲ့တော့ ။
စစ်သူကြီး ဟန်နီဘောလည်း ဟုတ်ရဲ့။
ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို သယ်ဆောင်ပြီး
လူတွေ အငြင်းပွားနေရသလိုမျိုးပေါ့လေ ။
ငါ့ကို မွေးဖွားခဲ့သတဲ့ ။
တကယ့်ကို ပါးပါးလွှာလွှာလေး လွဲချော်ခဲ့တာပါ
ဒါနဲ့ပဲ တို့ တစ်ဘဝလုံး ဝေးခဲ့ကြရ။
အစားထိုးလို့မရတဲ့ ကောင်းကင်ဆန်မှု မျိုးပါ။
မရေရာတဲ့ ဘဝတွေကို ပေးဆပ်ရင်း
မင်းနဲ့ငါ ဝေးကြရပြီလား ။
သုညကို စက်ဝိုင်းနဲ့ လွဲမှားခဲ့သူပါ။
မော့သောက်ပစ်လိုက်ရဲ့ ။ ။
(ပန်းနုရောင် ဆံပင်များ၏ ချည်တိုင် …မှ..)
လူတချို့ သူ့ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။
၁။ ရွှေဒင်္ဂါး
၅။ အမြုပ်တစီစီထနေတဲ့ ဝိုင်ပုလင်း
၁၀။ အတုလုပ်ထားတဲ့ နံနက်စာ
၁၁။ မိမိကိုယ်ကို မုန်းတီးရေးဝါဒ အစရှိတာတွေ
င်္ အို အဖ ဘုရားသခင် င်္
အဲသလို တချွင်ချွင် မြည်ခဲ့ဟန်
(ပန်းနုရောင် ဆံပင်များ၏ ချည်တိုင် …မှ ..)
ဘာတစ်ခုမှ မရလို ။
ဒါ ဘယ်သူ့ မျက်လုံးတွေဲ
မင်းက တိတ်ဆိတ်လို့ … ။ ။
အချစ်ဆိုတာ ပွဲလမ်းသဘင် ဖြစ်ရင်
ကျွန်တော်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အမှီအခိုကင်းချင်တယ်
ဒါမှမဟုတ် ဘုရားမှာ လှူမလား
ကျွန်တော်နဲ့ ခင်ဗျားကြားမှာ ပန်းတစ်ပွင့် ခြားနေတယ်။ ။
သားလှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ် အမေ ။ ။
နောက်ဘဝတွေမှာ ဆုံရအောင် ။ ။
နေ့ဆိုရင် လူတစ်ကိုယ်လုံး ချွေးစော်နံနေတာပဲ
လမ်းလယ်ခေါင်မှာ ကားဟွန်းသံတွေ ကျယ်လောင် ကျယ်လောင်နဲ့
အရောင်လွင့်မျက်လုံးတွေ အသံတိတ် စီးမျောလို့
အပြင်မှာ စိုက်ပျိုးချင်ရကောင်းလား တဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော့် အရေအတွက်ကို ဖြည့်ပေးဖို့။
ဘယ်တော့မှ ရန်မဖြစ်တော့ဘူးမောင် ..။ ။
လှောင်ရယ်ခြင်းနဲ့ ဘဝကို စတယ်။
ကိုယ်ဟာ မေတ္တာငတ်နေတဲ့ မီးတောက်။
လပြည့်ညကိုပဲ စိတ်လေတယ်။ ။
ဖွာရရာ ထစ် ချုန်း ပြတ် တောက် ကျနေခဲ့။
အဝါဖျော့ဖျော့နဲ့ ဂူသချိုင်္င်း ဆန်လာ။
မြေလို ပင်လယ်လို အက္ခရာတစ်လုံးနဲ့
ငါတို့ ဆက် ချစ် နေကြဦးမယ်။
လောက လူရိုင်းရဲ့ မှုတ်ပြောင်းဝကနေ
တုန်ယင်စွာ လူးလွန့်ထွက်ခွာခဲ့ရပေါ့။ ။
၁၉၉၅၊ ပန်းဝေသီ၊ သြဂုတ်
သူတို့ သိပ်ပြီး ပေါ့ပါးကြတယ်
သူတို့ သိပ်ပြီး အေးချမ်းကြတယ်
မြေမြှုပ်ဗုံးတွေနဲ့ ထောင်ချောက်တွေ မရှိ
သူတို့ သိပ်ပြီး လွတ်လပ်ကြတယ်
စစ်ပွဲတွေနဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ နယ်ခြားမျဉ်းတွေမရှိ
ကမ္ဘာမြေရဲ့ ရှုမျှော်ခင်းတွေကို ကြည့်ရင်း
ကောင်းကင်ယံမှာ သူတို့ လမ်းလျှောက်ကြ
သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေ မည်းညစ်သွားကြ
ပြီးတော့ မိုးစက်တွေကို ရွာချရင်း
သွေးပျက်စရာ ရှုမျှော်ခင်းများအတွက် ..။ ။
မိုး မကျသေးတာမို့ …။ ။
၁၉၉၅၊ ဇန်နဝါရီ၊ တေးကဗျာ
ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ထိုင်ခုံပေါ် ခဏတဖြုတ်တင်ထားတဲ့နေ့
ပန်းပုဆရာရဲ့ ဆောက်သွားမတိုးနိုင်တဲ့ အသားဟာ
အချစ်ဦး ဘယ်ရောက်နေသလဲ မသိဘူး
ရွက်ပုန်းသီးတွေ အခန်းထဲက ထွက်မလာကြဘူး
သူ ဘယ်အရပ်ဆီ ပျံသန်းမယ် ဆိုတာကိုလည်း
တုတ်တစ်ချောင်း ကိုင်ထားတဲ့ လောကဓံက
ခင်ဗျား ပျော်တယ် မဟုတ်လား …တဲ့
နှုတ်က … ဟုတ်ကဲ့ …လို့ အလိုက်သင့်ထွက်သွားပေမယ့်
စိတ်ထဲက ဟင့်အင်း …လို့ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆိုလိုက်တာ
မြင့်ရာက နိမ့်ရာကို စီးဆင်တဲ့ မြစ်ကိုကြည့်ရင်း
နိမ့်ရာက မြင့်ရာကို ဆန်တက်သွားတယ်
မြစ်ထက်လည်း စီးနှုန်းအား ပိုပြီး ပြင်းထန်တယ်။ ။
Posted by MANORHARY at 9:34 AM0comments